နေပြည်တော် တွင် စိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန် ဆိုင်ရာ ဈေးကွက်ဗဟိုဌာန စတင် တည်ဆောက် – Agri Digit News
Posted on Author adminComments Off on နေပြည်တော် တွင် စိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန် ဆိုင်ရာ ဈေးကွက်ဗဟိုဌာန စတင် တည်ဆောက်
စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်ဆိုင်ရာ ဈေးကွက်ဗဟိုဌာန အဆောက်အဦပန္နက်တော်တင် မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီခွဲက နေပြည်တော်၊ ပုဗ္ဗသီရိ မြို့နယ် ညစျေးအနီးရှိ သတ်မှတ်မြေနေရာတွင် Covid-19 ကာကွယ်ရေး လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပ ပြုလုပ်ရာ အခမ်းအနားသို့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ ၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးလှကျော်၊ နေပြည်တော် ကောင်စီဝင် ဦးအေးမောင်စိန်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်မောင်ဆွေ၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Lee Sang-hwa ၊ ကိုရီးယားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ(KOICA) မှ ဌာနေ ကိုယ်စားလှယ် Ms. Lee Youn Soo နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြပြီး စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန် ဆိုင်ရာ စျေးကွက်ဗဟိုဌာန အဆောက်အဦ ပန္နက်တင် အခမ်းအနားကိုဆောင်ရွက်ကြသည်။
အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် စိုက်ပျိုးသီးနှံ ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍသည် အဓိက အရေးပါ လျက်ရှိပြီး နေ့စဉ်စားသုံးမှုအတွက် အစားအစာဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ အရည်အသွေး‌ ကောင်းမွန်ပြီး အာဟာရတန်ဖိုးမြင့်မားရေး၊ ပြည်တွင်းဖူလုံစွာ စားသုံးနိုင်ရေးနှင့် နိုင်ငံခြားစျေး ကွက် သို့ အဆင့်အတန်းမီ တင်ပို့နိုင်ရေးတို့ အတွက် များစွာ အရေးပါလျက် ရှိကြောင်း၊ စိုက်ပျိုး ထုတ်ကုန်များ လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှု များပြားနေခြင်းကို လျှော့ချ နိုင်ရေးအတွက် နည်းပညာ ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်လာသည့်နည်းတူ မြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ စျေးကွက် စနစ် တိုးတက်လာစေရေး ၊ တောင်သူအိမ်ထောင်စုများ လူမှုစီးပွား ဘဝ တိုးတက်ရေး တို့ အတွက် ယခုကဲ့သို့ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ စျေးကွက်ဌာန နှင့် ထုတ်ကုန် ပြုပြင်ရေးဌာန တည်ဆောက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းအတွက် ထုတ်လုပ်သူနှင့် စားသုံးသူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးဖြစ်ထွန်း စေမည်ဖြစ်ပြီး အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိက၊ ထုတ်လုပ်သူတို့ ပူး‌ပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် နိုင်ငံတကာစျေးကွက်နှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည့် အခွင့် အလမ်းများ နှင့် ဒေသနေ တောင်သူလယ်သမားများ၏ အကျိုးစီးပွားကို များစွာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် မျှော်မှန်းပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Lee Sang-hwa က ဂုဏ်ပြုအမှာစကား ပြောကြားပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ KOICA ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Ms. Lee Youn Soo က ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာရဲတင့်ထွန်း က စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန် ဆိုင်ရာ စျေးကွက်ဗဟိုဌာန (Agricultural Marketing Center) အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ရခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှု အခြေအနေများအား ရှင်းလင်း တင်ပြသည်။
အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး၊ KOICA ဌာနေ ကိုယ်စားလှယ်၊ နေပြည်တော်ကောင်စီဝင် နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တို့ထံ အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးအပ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်ဆိုင်ရာ ဈေးကွက်ဗဟိုဌာန တည်ထောင်ခြင်း စီမံကိန်းကို ကိုရီးယားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီနှင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ အကူအညီ အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၈.၃၇) သန်းဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစီမံ ကိန်းကို စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်သူနှင့်စားသုံးသူ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အကျိုးစီးပွား ပိုမိုတိုးတက်လာ စေရန် ရည်ရွယ်၍ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် တွင် စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်ဆိုင်ရာ ဈေးကွက်ဗဟိုဌာန ကိုလည်းကောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ဟဲဟိုးမြို့နယ်တွင် စိုက်ပျိုးရေး ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်ပြုပြင်ရေးဌာနကိုလည်းကောင်း တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းစီမံကိန်းပြီးစီးပါက ထုတ်လုပ်သူတောင်သူများအတွက် စိုက်ပျိုးထွက်ကုန်များ၏ ဈေးကွက် သတင်းအချက်အလက်များကို ရရှိစေခြင်းဖြင့် ဈေးကွက်တည်ငြိမ်မှု အခြေအနေများကို ဖန်တီးပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကာ အဆင့်မြင့်ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာများ၊ထုတ်ကုန် စံချိန်စံညွှန်းများ၊ အစားအစာ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစစ်ဆေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဖြင့် စားသုံးသူများအနေဖြင့် လည်း အရည်အသွေးကောင်း၍ ဘေးကင်းလုံခြုံသော စိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန်များကို လက်လမ်းမီ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အဓိကစိုက်ပျိုးရေးထုတ်လုပ်သည့်နေရာများတွင် ထုတ်ကုန်များ တန်ဖိုးမြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ကနဦး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူအဆင့်မှာပင် စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန် ဈေးကွက် ကို တိုးတက်လာ စေရန် ရည်ရွယ်၍ ယခုတည်ဆောက်မည့် နေပြည်တော် စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်ဆိုင်ရာ ဈေးကွက် ဗဟိုဌာန နှင့် ဟဲဟိုးမြို့ တွင် ဆောင်ရွက်မည့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန် ပြုပြင်ရေး ဌာန (Agricultural Product Processing Center – APPC)များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါဌာနများ က စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များ အုပ်စုခွဲခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်း၊ အဆင့်အတန်းခွဲခြားခြင်း၊ စံသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သတ်မှတ်ခြင်း၊ အအေးခန်း သိုလှောင်ခြင်း နှင့် ထုတ်ကုန် ပြုပြင်သည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် တောင်သူ အဖွဲ့အစည်း များ ပိုမိုအားကောင်းလာစေခြင်းဖြင့် တောင်သူ လယ်သမားများ ကိုယ်တိုင် သီးနှံဈေးနှုန်း ညှိနှိုင်း နိုင်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းလုပ်ငန်းများ စနစ်တကျဖြင့် အရှိန်အဟုန်ကောင်းစွာ အောင်မြင် လာစေရန် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သမဝါယမ ဦးစီးဌာန နှင့် စည်ပင်သာယာ စျေးများဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ နည်းပညာ၊ အရင်းအနှီး၊ စျေးကွက် ပေါင်းစပ်ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာရဲတင့်ထွန်း က ပြောသည်။
ဈေးကွက်ဌာနများမှတစ်ဆင့် ဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက်ပံ့ပိုးခြင်း၊ ထုတ်လုပ် သူ တောင်သူအဖွဲ့အစည်းများ၊ အသင်းအဖွဲ့များ ပိုမိုအားကောင်းလာစေခြင်း၊ ထုတ်ကုန်များ စံချိန် စံညွှန်းနှင့် ပြည့်မီလာစေခြင်း၊ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းတို့အပြင် အအေးခန်း သိုလှောင်နိုင်ခြင်းကဲ့သို့ အခြေခံအဆောက်အဦဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ပိုမိုအားဖြည့် ပေးနိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသော စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်နိုင် သည့် စနစ်များ ဖွံ့ဖြိုးလာစေပြီး စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမဟာဗျူဟာ(ADS) ၏ မျှော်မှန်း ရလဒ်များ ရရှိနိုင်ရန်အတွက်ကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
စိုက်ပျိုးရေးပညာပေး ဝန်ထမ်းများအား အင်တာနက်အခြေခံသော ကွန်ပျူတာ သင်တန်းဖွင့်